Qonda ukuba yeyiphi iCeramics e-Chemistry
Igama elithi "i-ceramic" livela kwigama lesiGrike elithi "keramikos", elithetha "ubumba". Ngelixa i-ceramics zakudala yayingumbumbi, eli gama libandakanya iqela elikhulu lezinto eziphathekayo, kubandakanywa nezinto ezintle. I-ceramic isingqinisiso esingaqhelekanga , esingaqhelekanga , ngokuqhelekileyo isekelwe kwi-oxide, nitride, boride, okanye i-carbide, echithwe kwiqondo lokushisa eliphezulu. Iiceramics zinokuba ziphawulwe phambi kokuqhuma ukuvelisa isambatho esinciphisa i-porosity kwaye inobumba obuhle, obuninzi obunemibala.
Iiceramics ezininzi ziqulethe umxube we-ionic kunye nezibophelelwano ezidibeneyo phakathi kwama-athomu. Isixhobo esibangelwayo singaba sikristall, semi-crystalline, okanye i-vitreous. Izinto zokwenza ama-Amorphous ezinomxholo ofanayo zibizwa ngokuthi " iglasi ".
Iintlobo ezine eziphambili zeeramics ziyimhlophe, i-ceramics ezinokwakheka, i-ceramics yobugcisa kunye neekrakra. Ii-Whitewares ziquka i-cookware, i-pottery kunye neetereyili zodonga. Izakhiwo zeekheramkhi zakhiwo ziquka izitena, iipayipi, iipahla zokupakisha, kunye neetreyile zomgangatho. Iiceramics zobuchwephesha nazo ziyazi njengezodwa ezikhethekileyo, ezifanelekileyo, eziphambili, okanye ezenziwe ngeekeramiki. Eli klasi liquka iithwali, iileyile ezikhethekileyo (umz. Ukujikeleza kwendawo yokufudumala), izixhobo zendalo, iibheki zeramic, i-fuel nuclear, iinjinjini zeramisi kunye neengubo ze-ceramic. I-Refractories ziyi-ceramics ezisetyenziselwa ukwenza izixhobo eziphambili, imilenze yamanzi, kunye nokutshisa ukushisa kwiindawo zomlilo.
Indlela iCeramics eyenziwe ngayo
Izinto ezirhwexwayo zeeramics zibandakanya udongwe, i-kaolinate, i-aluminium oxide, i-silicon carbide, i-tungsten carbide kunye nezinto ezithile ezicocekileyo.
Izinto ezisetyenziswayo zidibene kunye namanzi ukwenza umxube onokubunjwa okanye obunyiweyo. IiCeramics zinzima ukusebenza emva kokuba zenziwe, ngoko ngokuqhelekileyo zifakwe kwiifom zazo zokugqibela ezifunwayo. Ifomu ivumelekile ukuba yome kwaye ikhunjulwe kwi-oven ebizwa ngomlilo. Inkqubo yokuqhuma inika amandla ukuseka izibophelelo ezintsha zeekhemikhali kwizinto eziphathekayo (i-vitrification) kwaye ngamanye amaxesha amaminerali amasha (umzekelo, iifom mullite ezivela kwi-kaolin ekuqhubeni i-porcelain).
Ukuqhaqha kwamanzi, ukuhlobisa, okanye ukusebenza kwamaqabunga kungeniswa ngaphambi kokudubula kokuqala okanye kunokufuna ukuqhuma okulandelayo (okuqhelekileyo). Ukuqhuma kokuqala kokuvelisa i-ceramic umkhiqizo obizwa ngokuba yi- bisque . Ukuqhuma kokuqala kutshabalalisa izinto ezinobungozi kunye nezinye izinto ezingcolileyo. Ukukhwela kwesibini (okanye yesithathu) kunokuthiwa yi- glazing .
Imizekelo kunye nokusetyenziswa kweziCeramics
Ubumba, izitena, iileyile, i-clay, i-china kunye ne-porcelain ziyimimandla eqhelekileyo yeeramics. Ezi zinto ziyaziwa ngokusetyenziswa kwisakhiwo, ubugcisa kunye nobugcisa. Zininzi ezinye izinto zeeramic:
Kwixesha elidlulileyo, iiglasi zazibhekwa njenge-ceramic, kuba yinto eqinileyo engagqithanga kwaye isaphathwa njenge-ceramic. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba iglasi liyi- amorphous eqinile, iglasi igqithwa njengento ekhethekileyo. Ulawulo lwangaphakathi lwama-ceramics ludlala indima enkulu kwiipropati zabo.
I-silicon ecocekileyo kunye nekhabhoni inokuthi ithathwa njenge-ceramics. Ngomlinganiselo oqinileyo, idayimani ingabizwa nge-ceramic.
I-carlicide ye-silicon kunye ne-tungsten carbide i-ceramics yobugcisa eyanqande ukukhupha, ukubenza ibe luncedo kwiinqwelo zomzimba, ukugcoba iiplati zokumbiwa kwezimayini, kunye nezixhobo zamashishini.
I-uranium oxide (i-UO 2 i-ceramic esetyenziswa njenge-reactor fuel reactor.
I-Zirconia (zirconium dioxide) isetyenziselwa ukwenza ii-blame zamacwecwe zeekheram, amagugu, ii-fuel cells kunye ne-oxygen sensors.
I-zinc oxide (ZnO) i-semiconductor.
I-Boron oxide isetyenziselwa ukwenza izixhobo zomzimba.
I-Bismuth strontium ithusi ye-copper ne-magnesium diboride (i-MgB 2 ) i-superconductors.
I-Steatite (i-silicate ye-magnesium) isetyenzisiwe njengesistim sombane.
I-titanate ye-Barium isetyenziselwa ukwenza izinto zokushisa, i-capacitors, i-transducers, kunye nezinto zokugcina idatha.
Iiceramic artifacts zisebenzisekile kwizinto zokuchithwa kwembali kunye ne-paleontology kuba ukusetyenziswa kwazo kweekhemikhali kungasetyenziselwa ukuchonga imvelaphi yabo. Oku akubandakanyi nje kuphela ukubunjwa kodongwe, kodwa kunye nokwentliziyo - izinto ezongeziweyo ngexesha lokuvelisa nokuma.
IiCeramics ziquka uluhlu olubanzi lwezixhobo ezinzima ukuvelisa iimpawu zabo.
Uninzi lweeramikhi lubonakalisa ezi zakhiwo ezilandelayo:
Ngokuqhelekileyo brittle, enobunzima obubi
Ukuqhuba kakubi kombane kunye nocingo
I-modulus ephakamileyo ye-elasticity
Amandla amakhulu okunciphisa
Ukubonakala okubonakalayo kwimiba eyahlukeneyo
Iimviwo ziquka i-superconducting kunye ne-piezoelectric ceramics.
Inzululwazi yokulungiselela kunye nokubonakaliswa kweekheramics ibizwa ngokuba yi ceramography .
Izinto ezidibeneyo zenziwe ngeeklasi eziliqela, ezibandakanya iikheram. Imizekelo yeendidi ziquka i-carbon fiber kunye ne-fiberglass. I- cermet luhlobo lwezinto ezidibeneyo eziqukethe i-ceramic kunye nensimbi.
I- glass-ceramic i-noncrystalline impahla enekheramic. Ngelixa i-crystalline ceramics idla ngokubunjwa, i-glass-ceramics ifom ukukhipha okanye ukuvuthela i-melt. Imizekelo yeglasi-ceramics ibandakanya "iiglasi" kunye ne-glass composite esetyenziselwa ukubopha inkunkuma yenyukliya yokulahla.
Imbali yeNtshutshiso yoMlilo
I-Play Run Play ngokuphezulu kwi-I-Formation Playbook yakho
I-Original 5-Iron: i-Mashie
7 Iingcaphuno ezingaphezulu zokuphefumula Ukufunda Ngaphambi kovavanyo lwakho
Venus Leo kunye neVenus Aries - Uthando olufanelekileyo
I-Rock en Espanol - Abaculi abalulekileyo
Yiyiphi iForld Ford Mustang eDume kakhulu?
Amachiza kunye neenguqu zenyama
I-Peters Projection kunye neMephu yeMercator
Iingcebiso emva kokugqiba iziqu